China Steamed Foods Vacuum Inotonhorera vagadziri uye vanotengesa | ALLCOLD
Vacuum Nzvimbo Nzvimbo
1.Fast kutonhora kumhanya. Chikafu chakabikwa chakatonhora kusvika ku10 - chinongoda 20-30, chikafu chakabikwa chakatonhora kusvika ku20 ℃ mukati me10-20min.
2.Yunifomu yekutonhora.Pasi pemamiriro ekunze, chikafu chakatonhora kubva pakati kusvika kumusoro.
3.Two-danho kutonhora kudzikisa chikafu kurasikirwa nemvura. Kubva pakakwirira tembiricha kusvika 60 ℃, chikafu chinenge chakurumidza kutonhodzwa kudzivirira mabhakitiriya kukura nekukurumidza, chechipiri chekuchengetedza chinononoka kutonhora kudzikisa kurasikirwa kwemhepo, uye kugadzirisa kunhuvira kwechikafu.
4.Machine akagadzirwa nesimbi isina chinhu, yakakodzera chikafu hutsanana uye muchina une chitarisiko chakanaka.
5.High kunyatsoshanda uye simba-kuchengetedza.Two-danho kutonhora uye kunyanya mvura mhete pombi kuderedza kumhanya cost.6.One bhatani oparesheni uye troubleshooting ebetsero hurongwa.
1. Kamuri rekutsvaira - Kuteedzera chikafu chako chakagadzirwa nesimbi isina tsvina.
2. Vacuum system - Kuti ubvise mweya muvhevhu yemukati, wobva watonhodza chikafu pasi.
3. Refrigeration system - Kubata mweya wemvura mukamuri ino kuti uve nechokwadi chekuenderera kwekutonhora.
4.Control system-- Kudzora uye kuratidza mashandiro ezvinhu evhavha inotonhora.
Vacuum Nzvimbo Inotonhora Yekushandisa munda
Chikafu chakabikwa: miriwo yakabikwa, howa, nyama, nyama yenguruve, nyama yemombe, hove, shrimp nezvimwe.
Chikafu chakabikwa: Keke remwedzi, keke, chingwa nezvimwe.
Chikafu chakabikwa: mupunga wakakangwa, bhora rakakangwa, mupumburu wechirimo
4.Steam chikafu: Steam mupunga, manoodles, madomasi, sushi, chengetedza, hwemvura bun.
5.Kudya chikafu: mupunga dumpling, chikafu chinogadzirwa, mwedzi keke chikafu nezvimwe.
Talior Yakagadzirira Chikafu Vacuum Chando Sarudzo
1.Condensor Sarudzo: a. Mhepo inotonhorera condensor b. Mvura inotonhora condensor
2.Door Sarudzo: a. Musuwo unosimukira b. Horizontal Sliding Door
3.Machine zvikamu zvakagadzirwa: a. Yakabatanidzwa muchina b. Yakakamurwa muviri muchina
4.Refriji Sarudzo: a.R404a b.R407c
Pashure: Bakery inofefetedza inotonhorera
Zvadaro: Yakabikwa Nyama Inodziya Inotonhorera